Dhul gariir: Dukumiintiyada Iibinta Dhaqdhaqaaqa iyo Soo Bandhigida | Martech Zone
Waxaan helnay xoogaa aqoonsi ah maanta markii Martech Zone loo magacaabay a ilaha sare ee macluumaadka ku saabsan kaalmaynta iibka xeelado iyo teknolojiyad ka socota Seismic. Sannadkii la soo dhaafay, waxaan ku aragnay hal-abuur aan caadi ahayn oo ka jira meeshan kaas oo hagaajinaya suuq-geynta iyo isku-duwidda iibinta si ka wanaagsan sidii ay waligeed ahayd.
Barta nagu talisay - gadaal gadaal Forrester, Salesforce iyo LinkedIn - waa Dhul gariir. Seismic waxay dhistay shirkad maareynta maareynta maareynta ee abuureysa isku xirnaanta dukumintiyadaada iyo ilaha waqtiga dhabta ah ee macluumaadka sida SharePoint iyo Salesforce, iyadoo la hubinayo in qof kasta oo ka tirsan kooxdaada iibka uu haysto wixii uu u baahan yahay, markay u baahan yihiin.
Qalabka awoodsiinta iibinta sida Seismic wuxuu saameyn weyn ku yeelan karaa waxqabadkaaga iibka, oo leh faa'iidooyin la qiyaasi karo:
Wakiilka Iibka ee markabka - si dhakhso leh u tababaro shaqooyinka cusub oo ay u bilaabaan nashaadaadyo xambaarsan kootooyin buuxa.
Waxtarka waqtiga - celceliska celceliska kaliya 35 boqolkiiba waqtigooda ayuu runta ku iibiyaa… hadda waqti badan ayey ku qaadan karaan iibinta.
Kordhinta waxbarashada - hubi inaad wakiilladaadu aqoon u leeyihiin alaabada cusub iyo farriinta magaca.
Aqoonta macaamiisha - ku dhex milmaan softiweerka CRM si aad u siiso wakiillada aragti qiimo leh xisaab kasta oo macaamiil ah.
Dardargelinta wareegga - gaabin wareegga iibka, taas oo ka koobnaan karta otomaatiga suuq geynta iyo waqtiga u wareejinta qandaraasyada.
Soo gudbinta waxyaabaha - Lynchpin si loo xoojiyo iibka, isagoo awood u leh inuu ku bixiyo qalabka iibka saxda ah waqtiga saxda ah qalab kasta si loo hubiyo in khibradda hal-hal-ka ah ay ku dhacdo hab lagu celcelin karo.
Ganacsiyada maal-galiyay aaladaha waxtarka iibinta iyo ilaha kale si loo dedejiyo wareegga iibka ayaa arkay a 51 boqolkiiba hagaajinta heerarka beddelaadda macdanta, sida laga soo xigtay kooxda cilmi baarista ee Aberdeen. Ku saabsan Boqolkiiba 54 waxay arkeen koror sanad-ka-sanad-dhaaf ah oo ku saabsan iibinta kootada.
Tags: doc noolTababarka Suuq geyntadusha saaranwaxyaabaha iibka ahdukumiintiyada iibkadukumiintiyada iibkaKordhinta Iibkabandhigyada iibkaiibka iibkaWakiilka iibkaiibindhul gariirsharepoint
5 Siyaabood oo ay Kiniiniyada u badalayaan Khibradda Tafaariiqda